Naya Post Nepal | गर्भावस्थाको ९ महिनाः कुन महिना गर्भवतीले के गर्नु सहि ? के गर्दा ख”तरा ?
गर्भावस्थाको ९ महिनाः कुन महिना गर्भवतीले के गर्नु सहि ? के गर्दा ख”तरा ?
काठमाडौँ । जब गर्भ रहन्छ, खानपान र जीवनशैलीमा स’र्तकता अ’पनाउनै पर्छ । किनभने ग’र्भवतीले सेवन गर्ने खानेकुरा, गर्ने व्य वहार, भो\_ग्ने दि’नचर्या, सोच्ने शैली सबैको प्र’भाव गर्भको बच्चामा पर्छ । त्यसैले स्वस्थ्य एवं सन्तुलित खानपान गर्नु, खुसी एवं प्र’शन्न रहनु, स’क्रिय हुनु, सकारात्मक सोच्नु, सुत्ने-उठ्ने-खाने तालिका नि ‘यमित गर्नु अ’परिहार्य छ, खासगरी ग”र्भावस्थामा ।
गर्भ रहेदेखि महिलाको शरीरमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिन थाल्छ । हर्मोनको असन्तुलनले केहि स”मस्या पनि निम्त्याउँछ । त्यसैले यी सबै कुराको जा’नकारी लिएर कुन अ’वस्थामा के गर्ने भन्ने ज्ञान हुन आ’वश्यक छ ।
गर्भावस्थाको प्रा’रम्भिक ल’क्षण
महिनावरी महिना च’क्रक्रम रोकिनु, चक्कर लाग्नु, वान्ता हुनु, कहि ले कहिं ज्व’रो पनि आउन सक्छ, सुरुवाती दिनमा ह’र्मोनल परिवर्त नको का’रण केहि शा’रीरिक स”मस्याहरु देखापर्छ ।
कुनैपनि भार उठाउनमा परहेज गरौ, व्या’याम पनि त्यती गरौं, जो चि’कित्सकले भनेका छन्। ताजा र पौ’ष्टिक भोजन सेवन गरौ, ता कि बच्चालाई पूर्ण रुपमा पो’षण मिलोस्, आफुनो भोजनमा पत्तेदार स’ब्जी, दुध र दुधजन्य पदार्थ सामेल गरौ। भिटामिन-सिले भरपुर प दार्थ लिनुहोस् । दिनमा कम्तीमा ६-७ गिलास पानी पिउनुहोस्।
सबै गर्भवतीमा एकै किसिमको ल”क्षण नदेखिन सक्छ । थ’कान लाग्ने, च’क्कर लाग्ने हुन्छ । धेरै पटक पिसाब लाग्न सक्छ। झ’र्को लाग्न सक्छ।
यस समयमा मदिरा, ड्रग्स वा विषाक्त पदार्थको स’म्पर्कमा बस्नुहुन्न । आफ्नो म’र्जी अनुसार कुनैपनि औषधी सेवन नगर्ने । आफ्नो खाने कुरामा प्रोटिन, क्याल्शियम, का’र्बोहायडे्रट, ताजा फल आदि सामे ल गर्नुहोस्। यतिबेला ह’ल्का थ’कान लाग्नसक्छ, त्यसैले प”र्याप्त आ’राम लिनुहोस् ।
यस अवधीसम्म आइपुग्दा तपाईको ग’र्भ नि’कै प’रिपक्क भइसके को हुन्छ । विगतमा जस्तो स’मस्या वा खतरा हुँदैन। भ्रु’ण ति’ब्र रुप ले बिकास हुन थाल्छ । यो’नीश्राव ब’ढ्न सक्छ । कब्जियत हुनस क्छ । यतिबेला तपाईको ग’र्भवती पेट देखिन थाल्छ।
बच्चाको तौलको बढेकाले क’म्मरमा पी’डा हुनसक्छ । त्यसैले ग’ह्रौं बस्तु उ’ठाउन हुन्न । फ्ल्याट जु’त्ता लगाउनुपर्छ । आरमले बस्नुपर्छ। प’र्याप्त मात्रामा क्या’ल्शियमको से’वन गर्ने, हल्का व्या’यम गर्ने ।
यतिबेला गर्भको बच्चा चल्न थालेको म’हसुष हुन्छ । ग’र्भाशय ब’ढ्न थाल्छ । थकान लाग्न सक्छ, क’ब्जियत हुनसक्छ । पेट फुल्ने स’मस्या पनि देखापर्छ । भोक लाग्छ । सफा यो’नीश्राव हुन्छ ।
तपाईको छाला र मांसपेशी ग’र्भस्थ शिशुको स’मायोजित गर्नका लागि फै’लन सुरु गर्छ । त्यसैले खुला एवं ह’ल्का पहिरन लगाउने। तरल पदार्थ पिउने । सब्जी र फ’लफूल सेवन गर्ने । यतिबेला डेढ देखि दुई किलोसम्म तौल बढ्न सक्छ, चि’न्ता नगरौ ।
तपाईको गर्भमा ति’ब्र रुपमा शारीरिक प’रिवर्तन हुन्छ । बच्चा स’क्रि य हुन थाल्छन् । बच्चाले खुट्टा चलाएको म’हसुष गर्न सकिन्छ । य तिबेला थ’कान लाग्ने, पेट फुल्ने, भोक लाग्ने, सास लिन गा’ह्रो हुने, कम्मर दु’ख्ने स’मस्या हुनसक्छ ।
आरमदायक ढं’गले बस्ने । सन्तुलित भो’जन लिने । मुलायम प’हि रन लगाउने । मनलाई प्र’शन्न राख्ने । मनमा चि’न्ता नलिने । कुनै भ’य नलिने । किनभने यसको न’राम्रो अ’सर गर्भको बच्चामा पर्न सक्छ । विहान-बेलुकी टहल्ने । अचानक उठ्ने वा बस्ने नगरौ । कु नैपनि काम गर्दा वि’स्तारै गर्ने । भोग लाग्नु स्वभाविक हो, तर जंक फूडको सेवनबाट बचौं ।
यतिबेला शरीरको तौल ति’ब्र रुपमा बढ्न थाल्छ । शरीरको तापमान ब’ढ्न सक्छ । स्तनको आ’कार बढ्छ र निप्पलमा कालो घेरा लाग्न सुरु गर्छ । पेटमा हलका पी’डा हुन सक्छ ।
यसबेला आरम गर्नु नि’कै म’हत्वपूर्ण हुन्छ । सहि मु’द्रामा आरम गर्ने । खुट्टा सुन्निने सं’भावना भएको धेरै समय खुट्टा झुन्ड्याएर नबस्ने । सुतेको बेला खुट्टामा सि’रानी राख्ने । गहिरो सास लिने र छा’ड्ने अभ्यास गर्ने । पौष्टिक आ’हारा लिने । अ’धिक मात्रामा पेय प’दार्थ लिने ।
भ्रुणको विकाससँगै तपाईको शरीरमा रगतको आ’वश्यक्ता पर्न थाल्छ । त्यसैले रगत बनाउने खाद्य पदार्थ से’वन गर्नुपर्छ । स्तन कोलेस्ट्रम नामक एक सफा तरल प’दार्थ चुहिन सक्छ । क’म्मर दुख्ने र सास बढ्ने समस्या देखापर्छ ।
आफ्नो अन्तिम तेस्रो महिना चिकित्सकको स’म्पर्कमा रहने । मनमा भय र चिन्ता नलिने । खानपान र जीवनशैलीमा स’न्तुलन ल्या’उने । आ’रम गर्ने ।
गर्भावस्थाको आठौं महिना आफ्नो स्वास्थ्यप्रति एकदमै स’र्तक हुनुपर्छ । गर्भ र आफ्नो शारीरिक सं’रचनामा धेरै प’रिवर्तन हुन सक्छ । यतिबेला गर्भको बच्चा पनि उ’र्जावान भइसकेका हुन्छन् ।
पानी, फल र रसको से’वन गर्ने । मसलेदार वा ए’सिडयुक्त भोजना सेवन नगरौ । न’कारात्मक बि’चार त्या’ग्नुपर्छ । नकारात्मक स्थानमा बस्नु हुँदैन । जति सकिन्छ, शा’न्त भएर बस्ने
गर्भावस्थाको यो महिना पूर्ण अ’वधी मानिन्छ । कुनैपनि स’मयमा तपाईमा प्रसव पी’डा हुन सक्छ । शारीरिक एवं मानसिक रुपले आफुलाई त’यार राख्नुपर्छ ।
प्र’सवको समयमा लगाउनका लागि आ’रमदायक पहिरन तयार गर्ने । नवजात शिशुको लागि आ’वश्यक सा’मग्री ख’रिद गर्ने । प्र’सुती गृह एवं अस्पतालको पायक पर्ने स्थानमा बस्ने । या’तयातको व्य’व स्था गर्ने ।
२०७८ पुष १८, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 135 Views